Data Sayenzi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Data sainzi ibasa rinopisa pabasa izvozvi. Sekureva kweUS Bureau yeLabour Statistics, basa revanoverengera uye vanoongorora data vanotarisirwa kukura makumi matatu kubva muzana muna30. Izvi zvinodaro nekuti mabhizinesi ehukuru hwese ari kuunganidza huwandu hwakawanda hwe data, uye vanoda vanhu kuti vavabatsire kunzwisisa zvese izvi. Icho chikonzero nei data sainzi iri kuve ichi chinotevera chikuru chinhu imhaka yehuwandu hwakawanda hwedata ratiri nhasi. Tiri kugara munyika yatiri kugadzira 2024 quintillion mabheti edata zuva rega rega. Data Sayenzi hunyanzvi hwakakosha kumakambani ese. Iyo inovandudza kushanda zvakanaka uye inopa kujeka mune rako bhizinesi. Uine Data Sayenzi, unogona kutora sarudzo zvichibva pane chokwadi kwete pane zvekufungidzira. Tiye chakanyanya kukosha chinhu nezve data sainzi ndechekuti inobatsira mabhizinesi kuita sarudzo dziri nani. Kana iwe ukashanda mune data sainzi, iwe unogona kubatsira kambani yako kuti iwane nzwisiso nezvehunhu hwevatengi vavo, uye shandisa ruzivo urwu kugadzirisa zvirinani zvigadzirwa zvavo nemasevhisi.
Data Sayenzi Yakare, Yazvino uye Yemberi.
Chinetso chinotenderera pakona ndechekuti michina iyi inogona kubata neisina kugadziriswa uye yakarongedzwa dhata uye pamusoro pekuwanikwa kwemhando yepamusoro algorithms. Uye kana vakadaro, mhedzisiro ichave isingafungidzike. Tinogona kungofanotaura danho reshanduko raizoitika, shanduko chaiyo yaizove inokoshesa. Asi zvese izvi zvinoda nguva yakati rebei kuti iitike.
Kudzidza kwemuchina nhasi hakuna kuita sezvazvaive zvekare, nekuda kweiyo nyowani komputa matekinoroji. Sezvo mamodheru achifumurwa kune data nyowani, iyo iterative chikamu chekudzidza kwemuchina chakakosha sezvo ivo vachikwanisa kuchinjira vakazvimiririra. Ivo vanogadzira zvinodzokororwa, zvakavimbika mhedzisiro uye sarudzo nekudzidza kubva kumakomputa apfuura akapihwa kwavari. Kudzidza kwemuchina kwakazvarwa kubva papfungwa yekuti makomputa anokwanisa kudzidza pasina kunyatso gadzirirwa chero basa chairo kuti rishande, ndiko kuziva maitiro uye vaongorori vari kuronga nzira dzekuona kana makomputa angangodzidza kubva kudata kuburikidza nehungwaru hwekunyepedzera. Vanhu vamutsidzira kufarira muchina kudzidza senge Bayesian ongororo uye dhizaini kuchera zvinhu zvishoma senge zvisingadhuri kuchengetedza data, zvine simba uye zvakachipa zvemakomputa kugadzirisa uye kukura mhando uye huwandu hweruzivo rwuripo. Zvese izvi zvinhu zvakaita kuti zvikwanisike otomatiki uye nekukurumidza kuvaka mamodheru ayo anogona kuongorora akaomarara uye makuru data uye kununura yakajeka uye nekukurumidza mhedzisiro padanho rakakura kana zvichidikanwa. Nekugadzira chaiwo mamodheru, iwo mabhizinesi nemasangano vane mukana wakanaka wekucherechedza mikana inobatsira uye inobudirira uye kudzikisira njodzi nekudaro kuita muchina kudzidza chinhu chakakosha mumaindasitiri epakati. Iyo kare ndezvezvino uye zviripo ndezveramangwana. Dhata ndiyo mari nyowani. Iyo yakawanda data iwe yaunogona kupa nezve yako yakanangwa vateereri, zvakanyanya mukana iwe kuti ugone kukwezva ivo. Semuenzaniso, unogona kushandisa data kuratidza kuti vanhu vangani vari kushanyira webhusaiti yako, vanhu vangani vari kubaya pamashambadziro ako, uye kuti vanhu vangani vari kubaya baya kune yako saiti. Data Sayenzi kudzidza kwekutora ruzivo kubva kudhata. Iyo kuranga kusanganiswa kwekombuta sainzi, manhamba, uye masvomhu. Iyo yakafara munda, uye ine akawanda mashandisiro.
Kuwedzera kweData Sayenzi
Data Sayenzi inzvimbo inokura, uye inogona kusanganisa akasiyana siyana mabasa. Kutanga iwe une data data musayendisiti wekare, uyo aive nyanzvi yemasvomhu kana statistician. Zvino, iwe une data data sainzi wazvino, ndiani mumwe munhu anonzwisisawo bhizinesi uye anogona kubatsira kuita sarudzo dzinotungamirwa nedata. Dhata ndiyo mafuta matsva. Zvese zvatinoita, kubva pamabatiro atinoita kubva paA kusvika paB kusvika pakuzvivaraidza pachedu kuti towana sei nhau dzichangoburwa, dzinovakirwa panheyo yedata. Asi data sainzi haisi yezve kuunganidzwa uye kuongororwa kwedata. Anodaro Gaurav Munjal, musayendisiti wedhata ane MBA yekuHarvard Bhizinesi Chikoro, kutanga chaiko. Iyo data sainzi nyanzvi musayendisiti ane tarisiro pane data. Data sainzi inzvimbo inomhanya-mhanya uye inogara ichichinja munda, uye ramangwana rinotonyanya kunakidza. Sezvo maindasitiri mazhinji uye akawanda anomuka kune kugona kwedata, tichaona akawanda matsva uye anonakidza mashandisiro e data sainzi. Iko kugona kwekunzwisisa data kuri kuita 'mutauro' mutsva isu tese tinofanirwa kudzidza. Data sainzi ndiko kupindirana kwezviverengero, sainzi yemakomputa, uye masvomhu, uye inzvimbo inokura mukati meindasitiri yehunyanzvi.
Nei Data Sayenzi chiri chinotevera chinhu chikuru?
Nyika yese iri kuenda padhijitari, uye tekinoroji nyowani nyowani, kubva pasocial media kusvika kupfeka kuInternet yezvinhu, inogadzira huwandu hwakawanda hwe data. Sayenzi inzvimbo inokura, uye inogona kusanganisira akasiyana siyana mabasa. Kutanga iwe une data data musayendisiti wekare, uyo aive nyanzvi yemasvomhu kana statistician. Iyo data sainzi nzvimbo iri kuwedzera kuwanda. Kune makambani akaita seTarisisa, Mode, uye Domino Dhata Lab iri kupa data sainzi sevhisi. Kune zvekare vatengesi vechinyakare veBI vakaita IBM neOracle avo vari kutanga kupa data sainzi sevhisi. undefined Dhata sainzi sainzi yekubvisa ruzivo uye ruzivo kubva kudhata. Icho chirango chitsva. Izvo zvakanyanya nezve kuwana nzwisiso kubva ku data pane kushandisa manhamba. Dhata sainzi inogona kushandiswa kune akawanda akasiyana mafomu kubva pakutsanangura mapatani mune data kurumbidza zvigadzirwa zvinoenderana nekutenga. Chimwe chezvinhu chinozoshanduka muindasitiri yesainzi yedhata ndeyekuti sainzi wedhata anozove iye weinjiniya, mutungamiriri wezvigadzirwa, munhu wekushambadzira, uyezve webhizinesi. Data Sayenzi chiitiko chitsva mukushambadzira uye bhizinesi renyika, asi kukosha kwayo kuri kungokura chete. Data Sayenzi mubatanidzwa wehuwandu, komputa sainzi, uye masvomhu kuongorora data. Data Sayenzi inogona kushandiswa kuongorora data rapfuura kufanotaura mafambiro uye data remangwana